Antonio Conte oo durba bilaabay inuu kashifo ceebaha ciyaartoydiisa & xiddiga ay markaan luqunta iskula jiraan. – Gool FM
(Italy) 20 Luulyo 2019. Antonio Conte ayaa durba bilaabay inuu kashifo ceebaha ciyaartoydiisa, waxeyna markaan luqunta iskula jiraan Ivan Perisic oo ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda ka dhisan magaalada Milan.
Antonio Conte oo dhawaan loo dhiibay xilka kooxdaan ayaa aaminsan in Ivan Perisic uusan sinaba ugu habooneyn doorka uu weydiistay inuu ciyaaro.
Iney kooxda u guureyso hanaan ciyaareedka 3-5-2 ayaa soo banaan bixisay ceebaha iyo waxyaabaha uu ku liito Ivan Perisic, wuxuuna maanta kasoo kacay kursiga keydka kulankii ay 1-0 guuldaro ah kala kulmeen Man United.
“Waan shaqeyneynaa, balse jawaabaha aan helayo ma ahan kuwa wanaagsan” ayuu yiri Antonio Conte.
“Uma maleynayo in Ivan Perisic uu ku haboon yahay doorka aan weydiistay inuu matalo, sidaas darteed booska kaliya uu ciyaari karo hadda waa afka hore”
“Dhinaca kale, waxaan arkay Dalbert oo si wacan uga ciyaaraya dhanka bidix, si adag ayuu u shaqeeyay, waan ogeyn inaan dhibaatooneeno kulankaan iyo guud ahaan kulamada fasaxa, inkastoo shaqo badan qabanay, mana heysano dhabtii waqti aan ku tababarano”
Waxaa la fahamsan yahay in Perisic uusan qeyb ka noqon doonin qorshaha Antonio Conte, horayna waxaa si cad loogu sheegay iney kooxo kale raadsadaan Mauro Icardi iyo Radja Nainngolan.
Borja Valero ayaa la tuhunsan yahay inuusan ka qeyb aheyn qorshaha Antonio Conte kaasoo la filayo inuu dib ugu laabto kooxda Fiorentina oo haatan wada hadal uu u socdo.